८ वर्षे वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई टुङ्ग्याएर फर्किंदा हातमा न पैसा थियो, न त बिहेपछि स्वदेशमै केही गर्ने व्यवसायिक योजना नै ! - Gulf Sandesh
८ वर्षे वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई टुङ्ग्याएर फर्किंदा हातमा न पैसा थियो, न त बिहेपछि स्वदेशमै केही गर्ने व्यवसायिक योजना नै !
January 23, 2019 January 23, 2019 GulfSandesh0Comments
कतारमा काम गर्दै गर्दा डिल्लीराज उप्रेतीलाई प्रेमिका दीक्षाले भनिन् ‘मसँग विवाह गर्ने भए, सधैंलाई विदेशको काम छाडेर फर्कनुपर्छ’ । अथवा बिहे गरेर कतार जाने हो भने बिहे नगरेकै राम्रो । तर उप्रेतीका लागि प्रेमिकाको यो शर्त त्यति सजिलो थिएन ।
सुखमा होस् या दुःखमा परिवारसँग मिलेर नै हरेक परिस्थितिको सामना गर्नुभयो दुवैले । हिजोआज डिल्लीराजलाई लाग्छ, परिवारसँग मिलेर खेपेका कठिन भन्दा कठिन हैरानी पनि हैरानी हुँदैनन् । ती त साथ र सहयोगका आधार बनिदिन्छन् ।
कतार पुगेको दुई वर्षपछि २०६२ सालमा काम गर्ने फिल्ड परिवर्तन गर्नुभयो । त्यसपछि एलजी इलेक्ट्रोनिक्स् कम्पनीमा काम गर्नुभयो । त्यो काम पनि बदलेर सुपरमार्केटमा काम गर्नुभयो । साभार :उज्यालो अनलाईन बाट जस्ताको तस्तै
← अब देखि वैदेशिक रोजगारमा जानेले २ सय डलर मात्रै साट्न पाउने भएको छ।
राहुल गान्धीकी बहिनी प्रियंका लाई कांग्रेसले पार्टी महासचिव को जिम्मेवारी दियो। →
January 12, 2019 GulfSandesh 0
धन कमाउन गएको छोरा लाश बनेर बाकसमा फर्कँदा परिवार र गाउँ नै शाेकमग्न ! Rip
अमेरिका जान चाहने नेपालीको भिषा किन अस्वीकृत हुन्छ ? कारण यस्तो छ ,जानि राख्नुहोस्
April 26, 2019 GulfSandesh 0